I-FAUCI Fridge Deodorizer kunye neFreshener yimveliso ekhethekileyo yesiphumo esetyenziswe ngokukodwa kwiifriji ukonyusa ukugcinwa kokutya okutsha kunye nokususa ivumba lokonakala.
Emva kokuyivula nokuyibeka kwifriji kangangeyure ezimbalwa, uyakuqaphela ngokucacileyo ukuba ivumba elingathandekiyo lalo naliphi na ivumba kwifriji liphele nya. Kwangelo xesha, uya kufumanisa kamva, ukutya kugcina kutsha ixesha elide.
Iqinisekisiwe ngamaziko agunyazisayo okuvavanya, ikhuselekile, ayinetyhefu kwaye ayicaphukisi ngaxeshanye, ayivelisi nayiphi na i-ozone, ke ngoko, ikhuselekile kwaye inobuhlobo kwindalo.
I-FAUCI yomoya i-Robot yentsholongwane, ethi idibanisaUkutshayela umgangatho, imisebenzi yokuthuthwa kothuli kunye nococeko kunye nemisebenzi yokubulala iintsholongwane komoya, yeyokuqala yohlobo lwayo. Yenzelwe amaziko amakhulu asendlwini anje ngeevenkile ezinkulu, isikhululo seenqwelomoya, izikhululo zikaloliwe, iindawo zokufikela ihotele, njl. Okona kufanelekileyo kukujongana nomoya weRobot. Izinto zomoya ezibulala iintsholongwane ziyakwazi ukukhulula izinto, ngokukhawuleza zisuse iintsholongwane ezinobungozi ezinje ngeentsholongwane zomkhuhlane, i-formaldehyde, njl.
Ayinabungozi kumzimba womntu njengoko kungqinwa luvavanyo lweSGS olwamkelwe kakuhle ngumgangatho we-FDA. Ngenxa yoko iRobot inceda ukuthintela ukuhanjiswa komoya kweentsholongwane kunye neentsholongwane esona sizathu siphambili sokwanda kwe-COVID-19. Okwangoku iRobot yethu yenza igalelo layo kumlo wokubuyiselwa kweshishini kulo bhubhane kwihlabathi liphela.